Ko Open Source inobatsira here? | Linux Vakapindwa muropa
edumix | | Zvimwe Linux, Free Software
Anoti Richard Stallman: Yemahara Software haisi yemahara software (…) zvirokwazvo unogona kuita mari neFree Software.
Inofungidzirwa kuti Mahara Software bhizinesi iri mukutsigira uye padiki padiki mune dzimwe nzira dzakadai sekudzidzisa kana kutengesa yepanyama software CD. Sekureva kwaStuart Cohen, aimbova CEO weiyo OSDL (sangano rinotarisisa kuedza kwemakambani kugadzira Linux kune bhizinesi munda) muBhizinesi reVhiki iyo modhi haisi kushanda nechimwe chikonzero uye ichiienzanisira nemabhizimusi eMicrosoft hombe neSuva izvo zvisina kukwanisa kushanduka kuita mibairo mikuru kana chibvumirano cheNovell (SuSE) kana iyo MySQL kutora zvakateerana.
Yakavhurika-sosi kodhi inowanzo kuve yakakura kodhi, isingade kutsigirwa kwakawanda. Saka akavhura-sosi makambani anovimba nerutsigiro uye sevhisi yega haana kureba kune ino nyika.
Yakadudzirwa uye nekutsanangurwa: Vhura sosi kazhinji yakanaka zvekuti haidi rutsigiro, saka makambani anovimba chete nerutsigiro haana ramangwana.
Nemutsara uyu handizive kuti ndoseka nemufaro here nekuti Mahara Software akanaka kana kuchema nekuti hapana bhizinesi. Ehezve, munyori anosimbisa iro basa reRed Hat nekuwedzera kukosha kune yayo distro nekupa rutsigiro rweiyo kernel iyo inogona kuwanikwa chete nekubhadhara uye iyo, nekudaro, Fedora kana CentOS hazvina kukwana, kunyangwe vakafanana sei navo ..
Ini handisi nyanzvi yezvehupfumi, ini ndiri accountant chete, saka handina kukwanisa kuyera chinyorwa, handikwanise kutaura kana chiri chakanaka kana chakaipa, asi pamwe pane tambo dzekuisa pamwechete, hazvinyatso kugonesa. ini, ndinozviona zvichityisa. Nekuti kana iyo modhi yekupa iyo software zvakasununguka uye kubhadharisa rutsigiro ikasashanda, ndizvo izvo isu tine dambudziko neyakavanzika Open Source bhizinesi modhi uye kuti ungawana sei raramo nazvo.
Mumwe mutsara kucherechedza muchinyorwa ndechekuti, sekureva kwake, makambani anofanirwa kuona modhi ye open sosi senzira uye kwete semagumo.
Pano iye anonongedzera kuti iko kushandira pamwe kunofanira kuenda kudivi remakambani ekuvandudza, iwo anoita madistros nemakambani makuru senge iwo anopa vanogadzira kuchengetedza kernel (ini ndinoiisa semuenzaniso chete) asi pamwe vachitengesa software yekudyara kana kubvisa chigadzirwa chinokurudzira kuti ubhadhare. Kune marezinesi anotsigira iyi modhi, iwo ndiwo ane mukurumbira with y BSD izvo zvinotendera shanda pasoftware yakavhurwa wobva waigadzira yega.
Zvatinogona kukurukura uye kutaura pamusoro pazvo zvingave zvinonakidza kana tikatenda kuti Mahara Software ichaenda kunosiya munda wekutandarira, kana iwe uchifungidzira, vamwe venyu vari programmers vanorarama neFree Software uye kana isu vamwe tiri software vatengi vanofungidzira vachibhadhara rutsigiro rwepamutemo.
Pane chinhu chatakataura nezvacho mu «Chii chinonzi Yemahara Software mushandisi?«. Chii chirikuita pfungwa mbiri, Yemahara Software mushandisi uye iyo mushandisi wakasununguka (inova yemahara mune iyi nyaya yeku "shandisa" dzimwe nzira dzemahara seyedzimba), ndiwo mhedzisiro yakatorwa nevazhinji venyu uye inonzwika mune izvo zvinomutswa naStuart Cohen, asi kwete kudivi revanhu vakaita semi asi kudivi yemakambani anotengesa software.
Asi kana iwe ukarega kugovana kodhi nemakambani uye vanhuwo zvavo vanouraya mweya we Open Source? Vhura Sosi inokutendera kuti uvhure kodhi uye wozovhara Asi izvo zvinogona kudzora kunaka kwesoftware sezvo paine maziso mashoma ekuiongorora, pamwe hongu, pamwe kwete, Cohen haashevedze makambani kuti ave Microsoft asi anotsvaga kudzikisira kuwana kodhi kuti iwedzere purofiti kana kuendesa software kune kuyerwa kwezvinodiwa zvekambani zvinoenderana nekodhi yemahara asi nekubhadharwa kwemunhu uye kugadziridza kwekambani.
Zvese zvinhu zvinopokana, kunyangwe paine murume ari kuzofenda neaya mazwi, ake ekutanga RMS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Ko Open Source inobatsira here?
Kana ini ndichida kuita mari ne software (ingave yemahara kana kwete) ndinofanira kuita zvinotevera (handiti ndinotsigira izvi asi ndizvo zvazvakaita):
1. Ndinoita chirongwa
2. Ini ndinoivandudza
3. Ndinozvivandudza zvakanyanya, kusvikira ndaita kuti ive yakanaka
4. Kuve ndakanakisa ndine vatengi vazhinji
5. Ini ndinongo gadzira zvishoma zvishoma nguva nenguva kuburitsa shanduro nyowani, nekuti kana ndikagadzira software zvakanyanya, ndinosara ndisina shanduro itsva dzekutengesa.
Pane point 5 tinogona kuigovanisa muzviviri:
a) Kana iri yakavharwa software:
Ndiri kuvandudza chirongwa ichi zvishoma nezvishoma kuburitsa vhezheni idzva dzakafanana kana zvishoma zvirinani pane yapfuura
b) Kana iri software yakavhurika:
Shanduro nyowani dzinouya netudiki tudiki, zvekuti software inoda rubatsiro rwakabhadharwa
Nehurombo izvi ndizvo zvazviri, zvechirongwa chinoda kuita mari, seRedHat.
Nei iwe uchifunga kuti Windows haichakure zvakanyanya uye Mac ichikura kuita OS yakanaka?
Uye, zviri nyore, Windows haina basa nekuvandudza iyo zvakanyanya, kana iine vatengi vazhinji, zvazvinoita kushandura girafu uye kukumbira imwe Hardware: P
Ndinofanira kuvhura gakava. Ndatenda.
Zvakanaka, pane iyi nyaya ndakurukura nevagari vemo nevasingazive, uye mumwe nemumwe ane chiono chake.
Ini ndinobvumirana nemurume uyu naStuart Cohen mune iro rakavhurika sosi ratove rakakura kwazvo, rakatsiga uye rakavimbika. Asi ini handibvume kuti hapana bhizinesi, kana zvisiri, zvirinani, kudzikiswa kwebhizinesi.
Semunhu muzvinabhizimusi, ini handidi kuenda mune zvakadzama mashandiro anoita chirongwa ichi, uye nekuda kwechikonzero ichocho ndinobata rutsigiro pachigadzirwa, uye ndinochitenga chibvumirano chakanangana nemugadziri wechigadzirwa, nekuti chivimbo changu mumhinduro, ruzivo uye basa rakanaka nezve chigadzirwa chavo, zvinondisimbisa.
Mune maforamu aya, ndakasundidzira rusununguko rwemushandisi, nerusununguko rwangu pakusarudza kuti software ipi yekushandisa, kungave kunonzi kunzi "proprietary" kana iyo yakavhurika.
Mumhando mbiri dze software pane rutsigiro. Kana zvasvika pakusarudza Oracle kana MySQL kana PostgreSQL, kutanga ndaongorora zvandinopihwa neimwe neimwe, nei ndichiida, uye kusvika papi pandinoronga kuenda. Mune yakasarudzika sisitimu ine hombe vhoriyamu yedata uye yakakwira kuwanikwa, hongu, ini ndinobheja paOracle, nekuti ini ndanga ndatove ndakashanda kakawanda nemaneja wedhatabhesi uyu uye haina kumbobvira yandigumbura. Nezve kwete zvakanyanya kutsoropodza masisitimu, ini ndaizosarudza mamwe, ayo andakashandisawo uye ave anobatsira kwazvo.
Asi sarudza Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Firebird kana SQLite, kuchengetedza mari yangu, ini ndaizotsvaga rutsigiro, pakati pezvimwe zvinhu nekuti ini handina nguva yekuita rutsigiro irworwo, uye handina ruzivo rwakadzika kana paitika njodzi. .
Ndiwo maonero angu. Muchidimbu: SL harisi bhizinesi rakawandisa sepakutanga, nekuti rakadzikama uye kune vazhinji vashandisi vanozviziva, asi kuchine bhizinesi, kunyangwe iri mune inonyanya kukosha.
Ini ndoda kubhadharisa chirongwa changu, pane kutengesa chirongwa :)
@Snead: Chokwadi, ini handifarire mhinduro iyoyo zvachose.Kune imwezve nzira yetsika? Zvinonzwika kunge chitsotsi che technical services xD
zvinyorwa, ndinofunga vanozviita mumaindasitiri ese. Uye isu tinoramba tichidya kunge vanopenga zvakafanana
Kubhadhara uye kugadziridza kwekambani? Zvinoita here? Mukunzwisisa kwangu, kana iwe ukagadzirisa chirongwa cheGPLized unofanirwa kuchiparadzira neicho rezinesi.
uyyyyy, nemusoro wenyaya uyu uye nehuwandu hwemashoko, ndinoona kuti vakaramba vakanyarara, nekuti zviri zvemari; nekuti kana ndiri programmer ndinofanira kuita raramo kubva pane chimwe chinhu uye mumwe anogona kuve nehuzivi hwese hwemahara software mushandisi waanoda, asi kana vakasangana nehomwe yako, mbatatisi dzinopisa ... Microsoft, asi vanozviita zvavanoita nekuti ivo ikambani inotengesa zvigadzirwa uye ndosaka kuzvipira isiri yavo sutu yakasimba. Nekuti zviri nyore kudzivirira kuve yemahara software mushandisi uye kuzvidza avo vanoshandisa proprietary software, kana munhu akawana izvi mahara software, asi ini handifunge kuti vazhinji vari kuda kuve vashanduri veaya mapurogiramu uye kushandisa nguva uye nesimba kuti vagamuchire chero chinhu. mukudzoka uye kunyange ini ndinofunga kunouya iyo "yemahara uzivi" iyo yavanodada nayo.
Ini ndinoronga zvekuvaraidza, kwete zvemari :)
Ini zvirinani kuti ndirarame sainjiniya pane kuita programmer, zuva rese pamberi pechiona: D.
Ndokusaka ini ndichitsigira mahara software
lonardi zvivakwa akadaro
Ini handitsigire yemahara software nekuti ini ndiri programmer uye ndinofanira kurarama pane chimwe chinhu …………….
Pindura kune lonardi zvivakwa
OpenDocument, chokwadi chekuti isu tinofanirwa kurarama